Ch 6 Asan'ny Apostoly – 2trondro
Home / Baiboly / Asan'ny Apostoly / Ch 6 Asan'ny Apostoly
Asan'ny Apostoly 6
6:1 Ary tamin'izany andro izany, tahaka ny isan'ny mpianatra dia tsy mitsaha-mitombo, dia nitranga ny nimonomonona ny Grika hanohitra ny Hebreo, satria ny mpitondratena dia notsaboina tamin'ny tsinontsinona eo isan'andro ny mpitondratenany.
6:2 Ary toy izany koa ny roa ambin'ny folo lahy, niantso ny miaraka ny mpianatra maro be, nanao hoe:: "Tsy rariny ho antsika ny hiala ao ambadiky ny Tenin'Andriamanitra mba hanompo tao amin'ny latabatra koa.
6:3 Noho izany, rahalahy, Endriky eo aminareo mandritra ny fito lahy tsara laza, feno ny Fanahy Masina sy ny fahendrena, izay mba hotendrenay hitandrina izany asa.
6:4 Na izany aza tena, isika dia ho mandrakariva amin'ny vavaka sy ny asa fanompoana ny Teny. "
6:5 Ary ny drafitra sitraky ny vahoaka manontolo. Ka nifidy an'i Stefana, lehilahy feno finoana sy ny Fanahy Masina, ary Filipo sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo, vaovao vao tonga avy any Antiokia.
6:6 Ireo dia narosony teo anatrehan'ny imason'i ny Apôstôly, ary rehefa nivavaka, dia nametraka tanana taminy.
6:7 Ary ny Tenin'ny Tompo dia nitombo, ary ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema nihamaro indrindra. Ary na dia maro be ireo ny mpisorona nanaiky ny finoana.
6:8 Ary Stefana, feno fahasoavana sy ny herimpo, nanao famantarana lehibe sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka.
6:9 Fa ny sasany, hiala amin'ny synagoga ny ilay antsoina hoe Libertina, sy ny Kyreniana, sy ny Aleksandriana, ary ireo izay avy any Kilikia sy Asia nitsangana ka niady hevitra tamin'i Stefana.
6:10 Fa izy ireo tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny Fanahy izay nitenenany izy.
6:11 Dia suborned olona izay mba milaza fa efa nandre azy niteny teny fitenenan-dratsy an'i Mosesy sy Andriamanitra.
6:12 Ary dia toy izany no izy hamporisika ny olona sy ny loholona ary ny mpanora-dalàna. Ary niara-nihazakazaka, dia nisambotra azy ka nitondra azy ho eo amin'ny Synedriona.
6:13 Dia nanangana vavolombelona mandainga, izay nanao hoe:: "Io lehilahy io tsy mitsahatra miteny ratsy ny fitoerana masina sy ny lalàna.
6:14 Fa efa renay izy nilaza fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia handrava ity fitoerana ity sy hanova ny fomba amam-panao dia, izay nampitaina Mosesy tamintsika. "
6:15 Ary izay rehetra nipetraka teo amin'ny Synedriona, nandinika azy, dia nahita ny tarehiny, toy ny hoe efa lasa ny tarehin'anjely.